Indlu eqaqambileyo, epholileyo kwisitrato esithe cwaka embindini.
Phantse ukulungiswa ngokupheleleyo, igumbi eliqaqambileyo elinegumbi lokuhlala kunye namagumbi okulala amabini, ikhitshi, iholo, igumbi lokuhlambela kunye nebalcony. Le ndlu ibekwe kwisitrato esithe cwaka kumbindi wedolophu, kufutshane neDucic Park, iDolophu endala, iPlatani Square, imarike yedolophu kunye neziko lezemidlalo kunye nolonwabo iBregovi. Indawo yokupaka yasimahla inikezelwe ecaleni kwepropathi. Iindwendwe zethu zithanda indawo kakhulu, ukucoceka kwendlu, indlela ehonjiswe ngayo, intuthuzelo kunye nezixhobo.
Isanda kulungiswa, ifulethi eliqaqambileyo, elinegumbi lokuhlala kunye namagumbi okulala amabini, ikhitshi, igumbi lokuhlambela, iholo kunye nebalcony. Indawo yokuhlala ikhululekile kakhulu ukuhlala, ineenkcukacha ezenza umoya ufudumele kunye nendawo enomoya. Iisofa kunye neebhedi zintsha kwaye zikhululekile, kwaye ikhitshi yenziwe kwimigangatho yanamhlanje. Ibalcony idlulela kwigumbi lokuhlala kwaye ijonge kwicala elizolileyo, likhuselwe kwisitrato. Ukusuka kumagumbi okulala kukho umbono omuhle we-chestnut, i-acacia kunye nemithi ye-cypress.
49" HDTV ene-izitishi zeTV eziqhelekileyo
Sikwindawo ezolileyo yaseBregovi, enye yeyokuqala ukwakhiwa esixekweni. Le ndawo ijikelezwe yipaki yedolophu kunye necawa yamaOthodoki, i-promenade ecaleni komlambo iTrebišnjica kunye neziko lezemidlalo kunye nokuzonwabisa.
Indawo yethu ikwingingqi ezolileyo yaseBregovi, eyenye yeendawo zokuqala zokuhlala edolophini. Le ndawo ijikelezwe yipaki yedolophu kunye necathedral yeOthodoki, iTrebišnjica promenade, kunye neziko lokuzonwabisa langaphandle.